शेयर गरौ -मिस वल्र्डमा अर्को तहल्का ! यसरी गुञ्जियो नेपाली गीत, विश्वभरिका सुन्दरीले गरे यस्तो स्वागत- (भिडियो सहित)-शेयर गरौ – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured शेयर गरौ -मिस वल्र्डमा अर्को तहल्का ! यसरी गुञ्जियो नेपाली गीत, विश्वभरिका सुन्दरीले गरे यस्तो स्वागत- (भिडियो सहित)-शेयर गरौ
शेयर गरौ -मिस वल्र्डमा अर्को तहल्का ! यसरी गुञ्जियो नेपाली गीत, विश्वभरिका सुन्दरीले गरे यस्तो स्वागत- (भिडियो सहित)-शेयर गरौ
काठमाडौं । चीनको सान्यामा जारी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको फाइनल भोटिङ विहीबार साँझदेखि खुल्ला भएको छ । फाइनल राउन्डको भोटिङ सुरु भएपछि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेकी श्रंखला खतिवडाले भोट गर्न फेरी एक पटक अपिल गरेकी छिन् ।
फाइनल राउन्डका लागि भोटिङ खोलिएको मिस वल्र्डको आधिकारिक फेसबुकबाट जानकारी पनि गराएको छ । आफुलाई मनपर्ने प्रतियोगीलाई मोडल पावर लाइभ र मबस्टारबाट पनि भोट गर्न सकिने जनाइएको छ ।
श्रृङ्खलाले आफ्नो फेसबुक पेजमा फिनालेको रातीसम्म भोट गरिरहन सवैलाई आग्रह गरेकी छिन् । ‘मलाई फिनालेसम्म भोट गरिरहनुहोला तपाईंहरु माझ साझा गर्न महत्वपूर्ण समाचार छ । चाँडै दिँदैछु’ उनले फेसबुक पेजमा लेखेकी छिन् ।
ब्यूटी विद् अ पर्पस अवार्ड जित्न सफल श्रृंखलाको भिडियोको गीत मिस वल्र्डमा गुञ्जिएको छ । प्रतियोगीहरुमध्ये जसले प्रस्तुत गरेको समाजसेवाको कार्यक्रमले निर्णायक मण्डलको मन जित्छ त्यही प्रतियोगीले यो अवार्ड प्राप्त गर्दछ ।
चिनमा भइरहेकाे मिस वर्ल्ड २०१८ मा सहभागिता जनाएर संसारभर चर्चा कमाइरहेकि नेपाली चेली श्रृङ्खला खतिवडाले राखिन मिस वर्ल्डकाे इतिहासमै यस्ताे रेकर्ड जुन अाजसम्म कुनै देशका सुन्दरीले राखेकि छैनन । अाखिर के हाे त्याे रेकर्ड ? सबैका लागि जिज्ञासाकाे बिषय बन्नु स्वभाविक हाे ।
मिस वर्ल्डकाे प्रतिस्पर्धामा देशलाइ चिनाइरहेकि मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाले मल्टिमिडिया अवार्ड जित्दै मिस वर्ल्ड २०१८ को अन्तिम ३० का लागि स्थान सुरक्षित गरेकी छन् । हेड टे हेडमा पराजित भएर निराश भएकि शृङ्खलाले फेरि सारा नेपालीलाइ खुसि दिलाएकि छिन । भनिन्छ नि प्रतिक्षाकाे फल मिठाे हुन्छ । अाखिर मिठै भएर निस्कियाे प्रतिक्षाकाे फल पनि । अन्तः मिस नेपाल शृङ्खलाले जितिन दुइटा अवार्ड ।
नेपालकी चेली श्रृङ्खलाले मिस वल्र्ड मल्टिमिडिया र ब्युटी विथ अ पपर्स दुई वटा अवार्ड जितेर इतिहास रच्न सफल भएकी छिन् ।दुई वटा अवार्ड जितेसंगै यो यस्ताे रेकर्ड बन्याे कि जुन अाजसम्म कुनै देशका सुन्दरीले बनाउन सकेका छैनन । सँगै मिस वल्र्ड प्रतियोगितामा दिइने फास्ट ट्रयाक अवार्ड जम्मा ५ वटा मात्रै छन । त्यसमा पनि अाजसम्म कुनै देशका सुन्दरीले २ अवार्ड जितेका छैनन । तर मिस नेपाल २०१८ श्रृङ्खलाले मिस वल्र्ड मल्टिमिडिया र ब्युटी विथ अ पपर्स दुई वटा अवार्ड जित्दै मिस वल्र्ड प्रतियोगिताकाे इतिहासमा दुई वटा फास्ट ट्रयाक अवार्ड जित्ने पहिलो सुन्दरी बन्न सफल बनेकि छिन याे संसारभर रहेका नेपालीहरूकाे लागि खुसिकाे खबर हाे ।
उनले मल्टिमिडिया अवार्ड र व्युटि विथ अ प्रपल अवार्ड गरि दुइवटा अवार्ड अाफ्नाे पाेल्टामा पारिन र मिस वर्ल्ड को फाईनलमा स्थान बनाइन । दाेस्राे हेड टु हेडमा सिंगापुरसंग पराजित भएपनि अन्तः श्रृङखला मिस वर्ल्ड २०१८ को फाईनलमा प्रबेश गरेकी हुन । यतिमात्र हाेइन टुरिज्म भिडियो च्यालेन्जमा पनि श्रृङखलाले तेस्रो स्थान बनाउँन सफल भएको छ । मेक्सिको र केन्याका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै श्रृङ्खलाले मल्टिमिडया अवार्ड हात पारेकी हुन् । उक्त अवर्डाका लागि चीन, केन्या, पोर्टी रिको, नेपाल र वेलायत भिडियो च्यालेञ्जका आधारमा उत्कृष्ट ५ मा परेका थिए । दुई वटा अवार्ड जितेसंगै संसारभर अनकाे चर्चा अझै चुलिएकाे छ ।
यतिबेला संसारभरका साेसल मिडियाहरूमा शृङ्खलाकाे चर्चा परिचर्चा भइरहेकाे पाइन्छ । धेरैले त उनलाइ यसपटककाे मिस वर्ल्डमा मुख्य दाबेदारका रूपमा हेरेका छन । पटकको मिस वर्ल्ड मा श्रृङखला जतिको चर्चा र प्रशंसा अरु सुन्दरीहरुको कमै भएको थियो । विश्वभरीका सुन्दरी प्रतियोगिताका प्रेडिक्टरहरुको नजरमा श्रृङखला परेपछि उनलाई लिएर नेपालीहरु ज्यादै उत्साहित र आसावादी बनेका थिए । नेपालले पहिलो पटक फाईनलमा स्थान बनाएसंगै नेपालीहरुमा उत्साह छाएको छ । उनलाई नेपाल लगायत बिदेशीहरुले पनि शुभकामना दिईरहेका छन् ।
मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाले चिनबाट मिस वर्ल्डकाे पेजबाट दिएकाे सुचना
जरुरी सूचना, नमस्ते सबैलाई।
मैले ऐले सामजिक संजालमा मेरो नाम प्रयोग भएका धेरै facebook page हरु देखिरहेको छु। म केवल miss world को official page मा मात्रै active रहेको छु र अन्य सबै pageहरु fake वा fan page हरु भएको यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै facebook page को post share गरेर missworld को vote count हुँदैन । miss world मा vote गर्न
१. mobstar app डाउनलोड गरि त्यसमा भएका posts लाइक गरेर र
२. miss world को आधिकारिक website मा गएर मेरो नाम मा vote हालेर मलाइ सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ https://missworld.com/#/contestants/5435
miss world को multimedia award अझै बाकी छ त्यसैले सक्दो vote गरि सहयोग गरिदिनु होला र भ्रामक कुरा हरु लेखी vote को लागि photo share गर्नु भन्ने fake page हरु लाइ report गरिदिनु होला। साथै मलाई दिनुभएको यति माया र साथ को लागि धेरै आभारी छु। सबै को जानकारी को लागि यो post SHARE गर्नुहोला। https://m.facebook.com/Miss-World-Nepal-297574443671301/
एमालेसँग छलफल गर्न तयार छु- सभामुख सापकोटा